Uthotho lweTV olugqwesileyo lwee-90s | Ndinike ixesha lokuphola
Abahlobo lolunye lothotho oludumileyo lwee-90s
Ukuba uyinxalenye yesizukulwana sewaka leminyaka, ngokuqinisekileyo unento enkulu ukulangazelela i-90's. Kwakungekho i-WhatsApp, i-Facetime kwaye ingathethi ngeNetflix kunye namanye amaqonga okusasaza. Nangona kunjalo, ukuba ukhule ngelo xesha, ngokuqinisekileyo umamele umculo weSpice Girls kunye neBackstreet Boys; Ukwaqaphele nefashoni emibalabala yobucwebe, impahla kunye nezinto zeenwele. I-Emoji yenza ukubonakala kwazo okuncinci okokuqala! Kwakunemfashini kakhulu ukuba ufunde amaphephancwadi kwaye ulinde veki nganye isahluko esitsha somboniso wakho owuthandayo. Kungenxa yoko Kule nqaku sinika imbeko kwezinye zeethotho zikamabonwakude ezilungileyo ze-90s.
Ngayo yonke itekhnoloji esinayo namhlanje, sinokuphinda sibabone nakweyiphi na iqonga. Ukukhumbula kuphila kwakhona! Konwabele oku kuhamba ngexesha!
1 Inkosana yeBel Air
4 USabrina, izinto zobugqwirha
5 Buffy iVampire Slayer
6 Imvakalelo yokuPhila (90210)
7 Mnu Bean
9 Izinto zoodade
10 Wonke umntu ufuna uRaymond
11 Indlu eneebhotile
12 Ifayile X
14 Umgcini womntwana
Inkosana yeBel Air
Uthotho lweMelika lwasasazwa ukusuka ngo-1990 ukuya ku-1996; Amaxesha ama-6 aveliswe zizonke iziqendu ezili-148. Umlinganiswa ophambili nguWill Smith, owayeneminyaka engama-22 ngelo xesha. Amaziko omxholo kwi Inkwenkwe evela ePhiladelphia ethunyelwe ukuba iye kuhlala neentsapho ezizityebi ngokwesicelo sikanina.
Umlinganiswa ophambili ngumfana ongakhathaliyo, owayeqhele ukuhlala ngokukhululeka, "edlwengula" kwaye adlale ibhola yomnyazi ngexesha lakhe lokuphumla. Xa efudukela eBel Air kunye noomalume bakhe abanempembelelo, uhlala nabazala bakhe abane ngamasiko, athe wabuguqula ubomi bakhe wabutshintsha namasiko awahlukileyo. Ngelo xesha, yayiyenye yemiboniso kunye nabaphulaphuli abaphezulu kwaye yaphawula ukumiliselwa kobomi obukhulu bukaWill Smith.
Idrama yaseMelika egxile kumatyala e iimeko ezingxamisekileyo zonyango. Ixelela ngobomi kunye neqela lobuqu kunye neqela lesibhedlele esinyaniweyo kwisixeko saseChicago kwaye ifumana abaguli abanamatyala angaqhelekanga ekufuneka bewasombulule ngokukhawuleza ukusindisa ubomi bezigulana zabo. UGeorge Clooney wayeyinxalenye yeqela loogqirha abaphambili!
Amaxesha ali-15 aveliswa zizonke iziqendu ezingama-331 ezaphela ngo-2009 zaqala ngo-1994.
Yadityaniswa njengenye yoluhlu lweentlobo zolu hlobo kunye nenani lamabhaso.
Uthotho lwamahlaya oluqhube iminyaka eli-10 namaxesha ali-10. Ithathwa njengenye yezona zinto ziphumelele ngalo lonke ixesha! Ubomi bemihla ngemihla babahlobo abathandathu ababaliswayo: URachel, uMonica, uPebe, uCandler, uRoss noJoey. Bahlala kwisiXeko saseNew York kwaye babelana ngolwalamano olusenyongweni lobuhlobo bokwenyani apho kuvela khona ezothando. Bahlala kuzo zonke iintlobo zeemeko ezenzeka kubantu abaqhelekileyo: imicimbi yothando, ukukhathazeka kwentliziyo, iingxaki zomsebenzi, iimeko zosapho ezinzima kunye nohambo lokonwaba, ukubiza imizekelo embalwa. Bonke bahlala kufutshane kakhulu omnye komnye ke bonke badibana kwindawo yokutyela rhoqo.
Olu chungechunge lunomdlalo omkhulu wokuhlekisa, ikakhulu noJoey noPhoebe njengomnye wabalinganiswa abahlekisayo abafumana ngaphezulu kokuhleka.
Olu luhlu luphawule imisebenzi yabo bonke abalinganiswa abaphambili, abaqhubeka nemisebenzi yabo kwiscreen esikhulu kwaye, ubukhulu becala, siqhubeka sisemthethweni.
USabrina, izinto zobugqwirha
Ekhombisa abadlali beqonga lomzuzu, uMelissa Joan Hart udlala uSabrina Spellman a Umfundi ofundela igqwirha ofumanisa eneminyaka eli-16 ukuba unamandla omlingo. Uhlala noomakazi bakhe ababini, uHilda noZelda abaphila iminyaka engaphaya kwama-600 kwaye nabo bangamagqwirha. Banayo i-Salem njengesilwanyana sasekhaya, ikati ethethayo kwaye banobuhlobo kolu thotho. Umboniso waqaliswa ngo-1996 kwaye isiqephu sawo sokugqibela saqala ngo-2003.
USabrina ufunda kwisikolo samalungiselelo njengentombazana eqhelekileyo kwaye iyelenqe lichaza indlela abukhulisa ngayo ubomi bakhe ukuba abe ligqwirha elinobungcali kunye nomntu omdala onoxanduva kwihlabathi lokwenyani apho kufuneka egcine amandla akhe ecaleni. Olunye uthando loonxantathu lwenzeka ngexesha lekholeji kwaye ukuphela kothotho kuchaza ngomtshato we-protagonist.
Ngokubanzi, isiqephu ngasinye sixelela ibali elahlukileyo elingahambelani ngqo nesiqendu sangaphambili kwaye nganye yazo ibandakanya uhlobo lokuziphatha. Ngaphandle kwamathandabuzo yayilelinye lawona manqaku awonwabisayo wokubukela ulutsha lwelo xesha!
Buffy iVampire Slayer
Kwakusemoyeni iminyaka emithandathu (1997-2003) kunye namaxesha asixhenxe. Umlinganiswa ophambili weBuffy Summers, udlalwa nguSarah Michelle Gellar. Ungumntu umbulali omncinci we-vampire ozama ukuphila ubomi bakhe ngendlela eqhelekileyo "eqhelekileyo". Ngalo lonke iyelenqe uyalamkela ikamva lakhe kwaye ngoncedo lomlindi uba ngumlo ongayekiyo nxamnye nemikhosi yobumnyama.
Ngexesha lesahluko ngasinye kufuneka ulwe nenani elikhulu lezithunzela kunye needemon ezihlasela uluntu.
Abanye abanemixholo efanayo bavela kolu ngcelele, kunjalo ngemeko ka-Angel.
Imvakalelo yokuPhila (90210)
Uthotho ludluliselwe iminyaka eli-10 (1990 ukuya ku-2000) kwaye lwasasazwa okokuqala kwi-FOX e-United States, kamva yaba yimpumelelo kwilizwe liphela. Uthotho lweesepha opera lumalunga ne-vUhambo olunelungelo lweqela labafundi bezikolo eziphakamileyo kwisixeko saseBeverly Hills. Ixesha lokuqala ligxile kubomi babazalwana bakaWalsh, kamva imixholo yenziwa ngokubanzi kwimixholo yolutsha.
UBrandon, uBrenda, uKelly, uSteve, uDonna kunye noNat bayinxalenye yeqela eliphambili lomboniso ophikisayo.
Yiyo Uthotho lwamahlaya Kudlala umlinganiswa onegama lothotho. Ungowemvelaphi yaseBritane kwaye izahluko ziqulathe iziza ezahlukeneyo, eyona nto iphambili kwindlela aziphethe ngayo uMnu Bean yayisekwe kunxibelelwano neempawu ngokubanzi.
Iziganeko, umlinganiswa kunye nendlela yokusombulula iingxaki ze-protagonist zenza umboniso owahlukileyo okonwabisayo ukuwubukela!
Ibaleke iminyaka emihlanu: ukusuka ngo-1990 ukuya ku-1995 kwaye kamva iifilimu ezimbini zakhutshwa ngo-1997 nango-2007.
Ngokuqinisekileyo lolunye lothotho olulinganiswe phezulu kwishumi leminyaka! Ilanga, isanti, ulwandle kunye nemifanekiso eqingqiweyo yokusindisa elunxwemeni yayiyeyona nto inomtsalane kangangeminyaka eli-10. Isiqendu ngasinye sinee-adventures ezahlukeneyo kwaye sibandakanya abantu ukonga kwiimeko ezinzima kakhulu.
Olu luhlu lubaleke amaxesha alishumi elinanye kwaye lwaphela ngo-2001.
Kudlala amawele afanayo Tia kwaye Tamera Mowry, iyelenqe libalisa ibali lika oodade ababini abangamawele bohlukene ekuzalweni. Bobabini bamkelwa ngabazali abohlukeneyo kwaye bayahlangana kwakhona xa beneminyaka eli-14 ubudala. Emva kokudibana okungalindelekanga, benza amalungiselelo okuhlala kunye kwaye ekugqibeleni badibane. Zombini zinobuntu obahluke kakhulu, obenza isiqendu ngasinye sonwabe kakhulu.
Ukuhlala phakathi kwabazali abamkele umntwana kwabangabamkeliyo kwabazali bakhe kukwahlukile.
Umboniso usasazwe ukusuka ngo-1994 ukuya ku-1999.
Wonke umntu ufuna uRaymond
Amaziko omxholo kwi Usapho lwase-Italiya-lwaseMelika olunabazali nabantwana abathathu. Abazali bakaRaymond, utata wosapho, bahlala phesheya kwesitalato. Ke baba lutyelelo oluqhubekayo kwaye ngamanye amaxesha olucaphukisayo oluvelisa inani elikhulu leemeko ezihlekisayo.
Ngokubanzi, owona mxholo uphambili yi ubudlelwane obubini kunye neengxabano ezenziwe phakathi kwezizukulwana ezahlukeneyo zabantu abahamba ngamanqanaba ahlukeneyo obomi.
Olunye lothotho olunikezelwa kakhulu kule minyaka ilishumi kwaye oluye lwonyusa kakhulu umsebenzi kaTim Allen.
Umboniso ubalisa ngobomi be Umsasazi kamabonwakude umxholo wakhe ophambili ofundisa ukusebenzisa izixhobo ezichanekileyo ke ababukeli banokwenza uphuculo lwamakhaya ngokwabo. Kwangaxeshanye, umlinganiswa ophambili kufuneka ajongane nenkosikazi elawulayo kunye nabantwana abathathu abadala iimeko ezihlekisayo.
Uthotho lwemfihlelo yesayensi emalunga ne umhlaba ongaphezulu komhlaba kunye nezidalwa ezingaqhelekanga. Kujikeleze le micimbi, iifayile eziyimfihlo zenziwe ziphandwa Iiarhente ezimbini zeFBI: uMulder kunye noScully. Zigcwele ukuthandabuza, isiqendu ngasinye sichaza iimeko eziyimfihlakalo ezavelisa ukungaqiniseki okukhulu phakathi kwababukeli.
Kwakusemoyeni kangangeminyaka eli-9 kunye namabhaso angama-61 anikezelwa zii-arhente ezahlukileyo kuquka neeMbasa zeEmmy kunye neGlobal Globes.
Yayiqala ngo-1993 yaza yavelisa amaxesha ali-11 aphela ngo-2004. UGqr. Frasier ngugqirha ophumeleleyo kakhulu enomdlalo kanomathotholo eSeattle. Ukwabelana ngeengcebiso zakhe ezilungileyo kunye nokuqonda kubaphulaphuli bakhe, ukanti kuya kufuneka ajongane nemicimbi ebomini bakhe.
Ugqirha wengqondo owaziwayo uqhawula umtshato kwaye ugqibela ngokuhlala notata wakhe kunye nenja egama linguEddie. Umzalwana wabo onzima ubatyelela rhoqo.
I-Café Nervosa yokutyela yenye yeendawo ezityelelwa kakhulu ngabalinganiswa abaphambili kunye nendawo yeziganeko ezininzi.
UFran Fine, ophambili, ngumfazi ophuma kumnombo wamaYuda othengisa izinto zokuthambisa kwindlu ngendlu kwisiXeko saseNew York. Ngengozi cWenzelwe ukuba abe ngumgcini wabantwana abathathu abangamakhwenkwe akumgangatho ophezulu oonyana bomhlolokazi mhle ogama linguMaxwell Sheffield, okwangumvelisi weBroadway.
Isiqendu ngasinye sibonisa uthotho lweetangathi ekufuneka uFran azisombulule ngenkxaso yomhlobo wakhe, uButler Niles. Umama kamakhulu nomakhulu wakhe ngomnye wabalinganiswa abahlekisayo kolu thotho.
Umboniso usebenze iminyaka emithandathu kwaye wazala iminyaka bhanyabhanya emva kokuba uphelile.
Ndiyathemba ukuba eli xesha lokuhamba belumnandi! Ufuna ukukhangela amaqonga alungileyo ukuze ukonwabele kwakhona into ocinga ukuba yeyona nto ingcono kumabonwakude wama-90.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Eyona midlalo yeTV i-90s